‘प्रेसिडेन्ट डे’ वेबहोस्टिङ अफर (सकियो) – Nepali Tech Blog
तपाई वेबसाइट वा ब्लग बनाउँनका लागि वेबहोस्टिङ किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन निकै फाइदाकारी सावित हुनेछ । आज प्रेसिडेन्ट डे को अवसरमा अमेरिकामा रहेका धेरै र अन्य स्थानका वेबहोस्टिङ कम्पनीहरुले विशेष छुटको घोषणा गरेका छन् । आजको विशेष छुटहरु केहि प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशतसम्म रहेका छन् । साँच्चै नै होस्टिङको जरुरत हुनेहरुका लागि यो अवसर विशेष नै हो ।
यो सँगै अर्को बोनस अफर पनि तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ मेरो तर्फबाट । मैले दिएको लिंकबाट वेबहोस्टिङ किन्नु हुनेहरुलाई मेरो तर्फबाट तिरेको मुल्यको ५० प्रतिशत मुल्य फिर्ता* दिनेछु ।
आजका विशेष छुटहरु :
१. होस्टग्याटर : यदि तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा एड ब्लकरको प्रयोग गर्नु भएको छ भने तल राखिएको होस्टग्याटरको छुटको लिंक सहितको तस्विर नदेखिन सक्छ । कृपया यो वेबसाइटमा अनावश्यक विज्ञापन नहुने हुनाले नेपालीटेकब्लग डट कमका लागि एड ब्लकर निष्क्रिय गर्नुहोस् ।
माथिको तस्विरमा क्लिक गरेर होस्टग्याटरको वेबहोस्टिङ किन्नु भयो भने तपाईले ४५ प्रतिशत छुट पाउँनु हुनेछ भने मेरो तर्फबाट छुट पछि तिर्नु पर्ने एक बर्षको मुल्यको आधा फिर्ता* पाउँनु हुनेछ ।
२. आइपेज :
यसमा आजको दिन तपाईले ८७ प्रतिशत छुट पाउँनु हुनेछ भने मेरो तर्फबाट छुट पछि तिर्नु पर्ने एक बर्षको मुल्यको आधा फिर्ता* पाउँनु हुनेछ ।
३. फ्याटकाउ :
आज तपाईले फ्याटकाउमा एक बर्षको वेबहोस्टिङ १५ डलरमा पाउँनु हुनेछ भने मेरो तर्फबाट छुट पछि तिर्नु पर्ने एक बर्षको मुल्यको आधा फिर्ता* पाउँनु हुनेछ ।
– वर्डप्रेस ब्लग वा वेबसाइट होस्ट गर्न कुन हो सस्तो र राम्रो होस्टिङ ?
– किन किन्ने होस्टिङ ?